Into eyahlukileyo yokuThetha ngokuLula (kunye nenyaniso yokuba "yayilungiselelwe ukuZonwabisa") e-NAB eNew York | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » Into eyahlukileyo yokuThetha ngokuLula (kunye nenyaniso yokuba "yayicetyelwe ukuba ibeNwabisa") eNAB New York
Into eyahlukileyo yokuThetha ngokuLula (kunye nenyaniso yokuba "yayicetyelwe ukuba ibeNwabisa") eNAB New York
Abasunguli be-arhente yentengiso yaseNew York bazakujoyina abameli beChannel yoNxibelelwano kunye no-Hewlett Packard Enterprise kwincoko malunga nohlobo olutsha lweearhente eziguqula intengiso.
UMZANTSI WE-YORK ENTSHA-Into eyahlukileyo enguMyili we-Tommy Henvey oyiNtloko kunye neQabane eliLawulayo uPatti McConnell uya kuthatha inxaxheba kwingxoxo yephaneli ekhethekileyo yokufumana indlela entsha yokudala intengiso esekwe kubelula kunye nokuthembela ku NAB Bonisa Inew York. UHenvey noMcConnell baya kudityaniswa noMlawuli oMkhulu wezeNtengiso wezoRhwebo kunye nesiCwangciso sokuHamba uClaire Avery kunye no-Hewlett Packard Enterprise oyiNtloko ye-Brand uMarissa Freeman kwiseshini ebizwa ngokuba yi-"Becingelwa ukuba Bonwabisa, "emodareyithwe ngu-Adweek Creative kunye noMhleli wezobugcisa uDavid Griner. Iseshoni icwangciselwe uLwesine, Okthobha 17 e2: 15 pm kwi Javits IZiko (Inqanaba 2).
Umsebenzi omkhulu ubalulekile. Iziphumo ozivelisela imicimbi yabathengi bakho. Kodwa nantsi into, ukuba ufika njani apho ibaluleke nangakumbi. Into eyahlukileyo lolunye uhlobo olutsha lweearhente ezigcwele-nkonzo, ezingasekelwanga nje ukuhambisa imiyalezo enamandla, eqinisekileyo, kodwa ukwenza njalo ngendlela ebhetele. Kule seshoni, abasunguli bearhente baya kudityaniswa ngabameli beCharter Communications kunye neHewlett Packard Enterprise kwincoko malunga nabantu abonwabileyo kunye nabathengi abonwabileyo abenza owona msebenzi mhle. Baza kunika ukuqonda malunga nendlela abayikhuthaze ngayo imeko-bume apho wonke umntu eyinxalenye yenkqubo, wonke umntu enebhongo ngokwenza loo nto bayenzayo kwaye bonwabile nangakumbi ukuba bayenza nabani.
UTommy Henvey izisa ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini yamava, esebenze njengoMlawuli oyiNtloko woBuchule eMcGarry Bowen nase-Ogilvy, uMlawuli weQela lokuYila kwiY & R kunye noMlawuli woBuchule kwiBBDO. Usebenze kububanzi babathengi: iFedEx, iDoritos, iMt. Umbethe, uPepsi, uLincoln, uVerizon, i-Century 21, i-Citizens Bank, i-Thomson Reuters, i-Kool Aid, i-NASCAR, kunye ne-Time Warner Cable ukubala ezimbalwa. Uyilo oluhonjisiweyo, efumene i-AICP, u-ANDY, uMnyhadala weFilimu waseCannes, uClio, u-Effie, uEmmy, uMnyhadala waseNew York kunye namabhaso e-One Show. Uyayithanda into ayenzayo kodwa uhlala edlala indawo emfutshane yeeYankees, nangona amathuba okuhla mihla le.
Patti McConnell uchithe ngaphezulu kwamashumi amabini eminyaka esebenza kweyona nto idumileyo emhlabeni kunye namashishini ehlabathi. Umsebenzi wakhe ubandakanye ukhenketho e-Ogilvy & Mather, apho ebekhonza njengoMlawuli weMveliso ye-NA kunye noMvelisi oLawulayo weAmerican Express, Coca-Cola, Kraft Foods kunye neTime Warner Cable, ukuqaphela ezimbalwa. UPatti ukwabambe iiposti ze-EP kuzo zombini i-BBDO kunye ne-JWT. Umsebenzi wakhe uqatshelwe kwi-AICP, i-ANDYs, i-Cannes Film Festival, i-Clios, i-Effies, i-Emmys, i-New York Festival kunye ne-One Show amabhaso.
UClaire Avery ngumrhwebi ophumelele kakhulu kunye nomakhi weempawu. Uqale kwi-Charter Communications kwi-2007 kwaye wakhawuleza wakhwela erenkini, ephumelela iMark kunye neCable Faxie amabhaso apha endleleni. Phambi kweCharter, wayekwiqela lokudala lokuthengisa kwi-AOL. Ungumfundi ophumelele kwiKholeji yaseBriar ePhole.
UMarissa Freeman ikhokele phambili ekusungulweni kwegama elitsha lenkampani iHPE, elaziwa njengeyona ndawo intsha yokungena kulo lonke iBrands yeHlabathi yeHlabathi yeHlabathi. Wongamela ukuthengisa uphawu lwehlabathi, intengiso, imithombo yeendaba, ubuhlakani bokuqukethwe, inkxaso kunye namava ebhrendi. Phambi kwe-HPE, uFreeman ubambe izikhundla eziphezulu kwi-BBDO, kwi-DDB nase-Deutsch LA. Umsebenzi wakhe kwi-DIRECTV e-Deutsch LA wamkhokelela kwiXesha leWarner Cable njengeSVP yeQhinga leBrand. Ungumamkeli we-AMA Marketer yoNyaka woNyaka kwaye kutshanje uye wabizwa njengomnye wabafazi abali-100 abaPhezulu kwiBrand Innovators. Uphumelele e-Montclair State University kwaye ufundise e-Columbia Business School nakwiYunivesithi yaseNew York.
UDavid Griner Ubegubungele amanqwanqwa aphezulu e-Adweek yeminyaka ye-12. Ukongamela iqela eligubungela imikhankaso yokusika, iimveliso zokwenza izinto, ubuchwepheshe obuvelayo, iiarhente kunye nokubonisana. Ungumenzi odumileyo #AdweekChat ibibanjwa ngolwe-Lwesithathu ngalunye ku-Twitter kunye nomsasazi we-podcast ka-Adweek “Ewe, mhlawumbi kusisiKhangiso,” esibizwa ngokuba yipodcast ebalaseleyo ka-2018 ngamaBhaso amaFolio. Kwi-2018, wabizwa njengeNtatheli yoNyaka ngumbutho oqeqeshiweyo wase-UK waseTyhini kwiNtengiso.
Into eyahlukileyo ifumaneka eBrooklyn, eNew York. Ngolwazi oluthe kratya, fowunela i-929-324-3030 okanye undwendwele www.itssomethingdifsoci.com
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba intengiso Izabelo zoBasazo Umagazini we-Broadcast Beat KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB eNew York NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 imisebenzi yokubonisa NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Yelizwe loPhuhliso 2019-10-09
Previous: I-CCTV iyaphumelela kuDrike lweBeather Rato nge-Lectrosonics Digital Hybrid Wireless
next: Ubuntu kunye neeprofayili: Eran Stern